Global Voices teny Malagasy · 12 Jolay 2019
12 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 12 Jolay 2019
vondrom-piarahamonina12 Jolay 2019
Frantsay ny reniny ary Alemàna ny rainy, tanaty tontolo iraisampirenena sy miteny fiteny maro no nitomboan'i Marie Bohner satria tanaty taranja iraisampirenena izy no nobeazina. Hatramin'ny fahazazàny, nanana namana avy aminà firenena sy lafivalo isankarazany izy, izay tonga mitondra ny kolontsain-dry zareo, ny mozikany, ny fiteniny, ny fomba nahazatra azy...
Azia Atsimo12 Jolay 2019
Amerika Latina12 Jolay 2019
Carmen Martínez ("At' Anni'", 2019), Ángeles Cruz ("Arcángel", 2018) ary Yalitza Aparicio ("Roma", 2018) no anaran'ireo vehivavy indizeny meksikàna fantatry ny olona eo amin'ny sehatra erantany.
Avy ao Strasbourg miaraka amin'ny fitiavana an'ireo Teny
Mediam-bahoaka12 Jolay 2019
Fihaonana tamin'i Suzanne Lehn, mpiara-mamoaka lahatsoratra ao amin'ny Global Voices ao Frantsa. Mpanoratra ao amin'ny GV i Suzanne sady mpandikateny avy ao Strasbourg, Frantsa, ary mpankafy fivezivezena.
Mifanamby amin'ny mponiny ny tanàna Espaniola mba hihena 100.000 kg ao anatin'ny roa taona
Eoropa Andrefana12 Jolay 2019
Nametraka fanamby manokana ho an'ireo mponina ao aminy ny tanànan'i Narón, Espaina, ao amin'ny faritra misy an'i Galicia: very 100.000 kilao ao anatin'ny roa taona. An-dalana ho tratra izany tanjona izany
Miara-misakafo amin’ny ben’ny tanana ny Kazakhs bilaogera sasany, ny hafa kosa ampidirina am-ponja
Kazakhstan12 Jolay 2019
Bilaogera Kazakh telo no nogadraina am-ponja nandritra ny 10 andro noho ny fanaovana hetsi-panoherana teo ivelan'ny trano fisakafoanana izay nihaonan'ny ben'ny tanàna tamin'ireo bilaogera tao an-toerana.
Ny zavatra maro ataon'i Gabriela García Calderón
Iray amin'ireo mpanoratra sy mpandika teny mavitrika indrindra ato amin'ny Global Voices i Gabriela García Calderón. Tia ny mamaky sy manoratra tantara momba ny fiainana andavanandron'ny olon-drehetra manerana an'izao tontolo izao ity mpisolovava ity.